“Tsenabe Tangorogna 2017”: jerena ny tontolo ambanivohitra any Alaotra Mangoro | NewsMada
Nanokatra ny tsenabe « Tangorogna 2017 », distrikan’Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro, nanomboka ny 18 nifarana omaly 23 jolay, ny Praiminisitra Mahafaly Olivier. Ankoatra izay, nitokana ny laboratoara mikirakira sy mamorona masomboly ary nametraka vato fehizoro ho fananganana biraon’ny faritra Alaotra Mangoro ihany koa ny tenany.
Fotoana iray ahafantarana ny ezaka ataon’ny tantsaha ny tsenabe. Ataon’ny fitondram-panjakana, ankehitriny, ny fijerena ny tontolo ambanivohitra. Voarakitra ao anatin’ny Paikady natao dinasa ny hoe “ny tontolo ambanivohitra, fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara”. Nanamafy ny lehiben’ny governemanta tamin’ny lahateny nataony fa « milina mampihodina ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tokony hotohanana ny ezaka tahaka izao ary tokony hatao isaky ny faritra, satria ahafahana mijery sy mandrefy ny ezaka efa nataon’ny fanjakana sy ny dingana mbola hatao eo amin’ny fandrindrana ny asa rehetra”.
Anisan’ny ezaka ataon’ny fitondrana amin’ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra ny fanomezana fiofanana ireo tantsaha, fizarana tany sy kara-tany. Ezaka hafa ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra, ny fampifandraisana ny tantsaha sy ny mpiara-miombon’antoka mba hahatonga azy ireo ho matihanina.
Laboratoara ao Ambohitsilaozana
Nanamarika ny fotoana ny fitokanan’ny Praiminisitra ny laboratoara mikirakira sy mamorona masomboly. Fotodrafitrasa lehibe ao amin’ny ivontoeram-pikarohana Fofifa Cala ao amin’ny kaominina Ambohitsilaozana io laboratoara io, miantoka ny fampandrosoana maharitra, ahafahana mitady vahaolana hahitam-bokatra mifandraika amin’ny fiovan’ny teotr’andro. Nanampy tamin’ny fanorenana azy io ny firenena japoney.
Eo anatrehan’ny tombontsoa azo avy amin’io ivontoerana io, nanambara ny praiminisitra fa “velombolo ny fitondram-panjakana miaraka amin’ny faritra, satria efa misy zavatra miainga amin’ny alalan’io laboratoara io”. Misy vokany ny ezaka ataon’ny faritra amin’ny fanohanana ny tantsaha sy iarahana amin’ny mpiara-miombon’antoka. Tokony hisandrahaka manerana ny Nosy ireny mpiara-miombon’antoka ireny hahafahan’ny fanjakana manampy tosika amin’ny ezaka atao.